Onu ogbom Type Shot ọgbụgba ọkụ Machine - China Qingdao Mmetụta Machine
Oghe resin Aja Reclamation Line
teknuzu parameters dị ka ndị a:
Usoro isiokwu a na-eji maka n'elu ihicha, nchara romoving, na n'elu intensification nke ọ bụla ụdị n'etiti na obere ọnụ ọgụgụ mgbatị,
ibe ya bụrụ na ọrụ. O kwesịrị ekwesị ka diffenent mmepụta ọnụ ọgụgụ, nwere ike ịbụ na-eguzo nanị iji na ọtụtụ unitscan na-eji na njikọ
na-aga n'ihu ebu mmiri, ha na-ede na mmepụta nke dị ọcha na-elu-e.
Q32 usoro idahari belt ụdị shot ọgbụgba ọkụ igwe nwere uru nke elu imewe, ezi uche Ọdịdị obere ume
oriri na elu arụmọrụ.
oke unit Q326 Q3210 QR3210
Productivity T / H 0.6-1.2 3-5 1.5-2.5
loading arọ kg 200 600 600
Dia: mita nke ala mm Dia: 650 Dia: 1000 Dia: 1000
dị ikike m³ 0,15 0.4 0.3
Erere Impelling Volume kg / min 100 250 250
Power Dissipation kW 12.6 32,6 24,3
ndepụta Dimensions mm 3681 * 1650 * 5800 3644 * 2926 * 5856 3972 * 2600 * 4768
Machine Total arọ kg 2340 5843 7400
The shot ọgbụgba ọkụ igwe nwere ike ahaziri dị na iche iche chọrọ.
Iji na-azụ ihe kacha adabara igwe n'ihi gị workpieces, biko na-egosi ndị na-esonụ nkọwa.
1. Olee ụdị workpiece ị dị ọcha?
2. The workpiece size, n'ogologo, obosara, ịdị elu na ịdị arọ nke kacha workpiece.
3. Gịnị bụ gị mmepụta ike kwa ụbọchị (8 awa)?
4. Ọ dị m ụtọ ma ọ bụrụ na ị nwere ike nye nkọwa workpiece photos anyị.
Dabere na ndị nkọwa ọmụma, zuru ezu oru amụma ga-zitere gị maka akwụkwọ.
Next: Ala Type gbara ọgbụgba ọkụ Machine
Fasteners gbara ọgbụgba ọkụ Machine
Foundry Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Industrial Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Rubber echebe gbara ọgbụgba ọkụ Machine
Idahari Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Clay Aja Jolt afanyekwa Nkedo Machine
Q32 Series Uwe mkpuchi akwa echebe Type Shot ọgbụgba ọkụ Machine